Miandry kabary | NewsMada
Fako sy fihinanambe. Ireo lohahevitra roa mifangarika kanefa mifameno ireo indray izao no malaza sy be mpiresaka indrindra. Hotontosaina rahampitso tokoa mantsy ilay lanonam-panjakana, ho fifampiarahabana noho ny taona vaovao, eny Iavoloha. Andro vitsivitsy izay, nandeha ny fifanentanana anatin’ireny tambajotra sosialy ireny, mba hanaovana hetsika hanafoanana izany.
“Mandatsa ny vahoaka, miaina anaty fako sy milomano anaty fahantrana”, hoy ny fanentanana. Misy mihitsy nandroso hevitra ny hampiasana ny vola tokony holaniana, hanalana haingana ny fakon’Antananarivo, na hanaovana fihinanambe ho an’ireo sahirana ihany koa.
Tsy mihemotra anefa ny fotoana nifanomezana. Tsy maintsy misy ny lanonana rahampitso eny Iavoloha. Na ireo mimenomenona aza, miandrandra ny kabary izay mety hataon’ireo manam-pahefana ihany. Andrasana fatratra izay holazain’ny filohan’ny Repoblika. Inona avy ny ho laharam-pahamehana? Sao kosa mba amin’io no hambara ny vahaolana haingana efa nomanina, manoloana ireo tranga mampimenomenona?
Samy miandry. Aleo handeha ny lanonana. Aleo handeha ny kabary. Sao hitombo ny asa vaovao, hiadiana amin’ny fahantrana. Sao hisy ny paikady hanalana ny fako sy hanamboarana haingana ny lalana. Sao hisy ny tetikasa ho an’ny tantsaha. Sao hisy ny politika ho an’ny fandriampahalemana. Sao hisondrotra ny karama. Sao mba… Henoy aloha ny kabary. Aoriana indray maneho hevitra.